Midziyo yekurapa isina Chinyorwa: Mawiricheya
Mimwe michina yekurapa inoda mushonga kubva kuna chiremba wako. Zvishandiso senge oxygen matangi zvinoda mushonga kana mupi wemidziyo haazoiti kuendesa. Mimwe michina yekurapa haidi mushonga wechiremba kuti iwe uwane, asi kana ukaronga kubhadharwa nemupi wako weinishuwarenzi, uchafanirwa kuwana mushonga kubva kuna chiremba wako.
Mushure memamwe marudzi ekuvhiya, zvekurapa zvinogona kudiwa kana murwere achidzoka kumba.
Yakasarudzika mibhedha yevarwere
Mibhedha yakafanana neiya inoshandiswa muzvipatara inobatsira murwere mukugara mushure mekuvhiyiwa. Iyi mibhedha inomisa zvakare murwere kuti arege kuwira pamubhedha wake. Kana murwere achida kugara pamubhedha, mibhedha iyi inoita kuti murwere asimudze uye adzikise misoro yavo kuti vagadzikane.
Iko hakuna kudikanwa kwekunyorerwa kubva kuna chiremba kubhadharisa kana kutenga chimwe cheizi zvishandiso. Kana chiremba wako achitenda kuti mubhedha unodikanwa nachiremba saka vanogona kunyora tsamba yekuti iwe uwane imwe. Iyo tsamba inouya inobatsira kana iwe uchida kugadzira inishuwarenzi murandu.
Bvunza Chiremba wako
Pachavo vakasika mavhiripu, madondoro, nemimwe midziyo yakati wandei yekubatsira varwere vari kunaya kubva kuzvirwere zvinovasiya vasingakwanisi kufamba-famba. Unogona kutenga midziyo iyi usingade kutumirwa kubva kuna chiremba wako. Kana chiremba wako achitenda kushandiswa kweyekuda midziyo kunodiwa saka yako inishuwarenzi yekuchengetedza hutano inogona kuvhara mutengo wekurendesa, kana kutenga, kwemidziyo.
Midziyo mizhinji, iyo yaimbovapo muchipatara kana paamburenzi, yave kuwanikwa kune chero munhu kuti atenge. Defibrillators ikozvino inogona kutengwa nechero munhu asina mushonga kubva kuna chiremba. Iko kuwanikwa kune aya maturusi pasina mushonga kunonyatso kuponesa hupenyu.
Kutenga pasina Prescription
Zvigadzirwa zvenguva dzose zvakadai semushini weropa, mawone eglucose eropa, uye ma nebulizers, zvinotengeswa kumafamasi mazhinji uye kunyangwe kunzvimbo yekutengesa yemuno. Iko hakuna kudikanwa kwachiremba chiremba kuti uve nezvigadzirwa izvi kumba. Iwe unogona kunyange kuraira thermometer, zviyero, stethoscopes, pamwe chete nemidziyo yekutarisa munzeve dzako, izvo zviri zvakaenzana zvakafanana neizvo zviri kukiriniki yechiremba.
Vamwe vanhu vari kutanga kuchengeta zvinhu izvi zviri nyore kwavari kuti vaite sarudzo dzakadzama nezvekuti vanofanirwa kunoona chiremba riini uye kuti ndirini pavanogona kugadzirisa nyaya pamba.
Chero chero rudzi rwechigadzirwa chekurapa chingangoguma kuipa kune mumwe munhu zvinoda kupihwa nachiremba, uye chero chinhu chaunoda murandu pamitero yako yemari, kana inishuwarenzi, inofanirwa kupihwa nachiremba.
Kasiri kare, michina yekurapa yaiwanzo kuwanikwa kunze kwenzvimbo yekurapa kana nzvimbo. Mazuva ano zvidimbu zvakasiyana-siyana zvekurapa zvinotengeswa pasina mushonga.